vivo Y20丨vivo Myanmar
ပြီးပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ 2.5D ကိုယ်ထည်သည် ပေါ့ပါးလှပလွန်းပြီး လက်ထဲမှာကိုင်ရတဲ့အခါလည်း ကွက်တိဖြစ်နေတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ခံစားရစေမှာပါ။ မျက်လုံးထဲ ထင်းခနဲလင်းခနဲ ဖြစ်သွားအောင် ထင်သာတဲ့ အရောင်သစ်တွေက ထူးခြားချက်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
လှပကြော့ရှင်းတဲ့ မီးတောင်ဖန်သားကဲ့သို့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီအရောင်ဟာ ခမ်းနားပြီး ရှုပ်ထွေးစွာပုံဖော်ထားတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုလို သပ်ရပ်စွာ လှပလို့နေပါတယ်။
နူးညံ့တဲ့ နံနက်ခင်း မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွေလို သက်ဝင်လှပနေတဲ့ ဒီအရောင်ဟာ သင့်ကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကမ္ဘာကြီးကို ထိန်လင်းစေတဲ့ အလင်းဖြာထွက်ခြင်းလိုပါပဲ။
ဘေးဘက်လက်ဗွေစနစ်နဲ့ စက္ကန့် ဝ.၂၂ အတွင်း သင့်ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒီ ဒီဇိုင်းအသစ်က သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာဖုန်းအသုံးပြုမှုအတွက် အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီတော့ ချက်ချင်းလက်ငင်း အမြန်ဆုံး ဖုန်းဖွင့်လို့ရတာပေါ့။ ဒါ့အပြင် Face Wake နည်းပညာဟာ သင့်ဖုန်းကို ဖွင့်ဖို့ စက္ကန့်ဝက်လောက်သာ ကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
*မော်ဒယ်အားလုံးသည် Side Fingerprint နှင့် Face Access ကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
*ဝ.၂၂ စက္ကန့်သည် ဘေးဘက်လက်ဗွေစနစ်နဲ့ ဖွင့်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ဖွင့်ချိန် ဝ.၂၂စက္ကန့်နှင့် မျက်နှာပြင်ပိတ်ချိန် ဝ.၃၇ စက္ကန့် ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမှန်တကယ် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
Qualcomm Snapdragon processor နဲ့ 64GB သိုလှောင်နိုင်မှုနဲ့ဆို Y20 က application တွေကို သင် စိတ်ရှိသလောက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။ Triple card slot ကလည်း မန်မိုရီကို 256GB အထိ သိုလှောင်နိုင်တော့ သင်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်တာပေါ့။
*256GB အထိ မန်မိုရီထပ်တိုးသိုလှောင်နိုင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ Micro SD ကဒ်ကို သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုသည်။
အဆိုပါ 5,000mAh (TYP) စူပါစွမ်းရည်ဘက်ထရီဟာ အပြင်းထန်ဆုံး စွမ်းအားစိန်ခေါ်မှုတွေလောက်ကိုတော့ အေးဆေးပါပဲ။ AI စွမ်းအင်ချွေတာသည့်နည်းပညာနဲ့အတူ တစ်ကြိမ်အားအပြည့်အားသွင်းရုံဖြင့် ၁၆ နာရီ အွန်လိုင်း HD ရုပ်ရှင်လွှင့်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်) resource အသုံးများတဲ့ ဂိမ်းတွေကိုတောင် ၁၁ နာရီကြာ ဆော့နိုင်မှာပါ။ အပြင်ရောက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း reverse charging စနစ်ဟာ အခြား devices တွေကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
*Reverse charging အား သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည့် OTG cable ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
* ပုံမှန်ဘက်ထရီပမာဏမှာ 5,000mAh ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီမှာ 4910mAh ဖြစ်သည်။
Super Macro ကင်မရာ
၄ စင်တီမီတာလောက် အနီးကပ်ဆွဲပြီး သင့်မျက်လုံးရှေ့က ကျောက်မျက်ရတနာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သေးမှုန်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဖွေရှာလိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးသန့် Multi-Turbo 3.0 ဟာ စနစ်၏ အခြေခံအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ Center Turbo နှင့် စနစ်မမှန်မှုများ (မကြာခဏ တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့) ကို မဖြစ်ခင်ထဲက ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးခြင်း၊ ဖြေရှင်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ AI Turbo တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုကောင်းသော ကွန်ယက်စွမ်းဆောင်ရည်မှသည် လျင်မြန်စွာအအေးခံခြင်း၊ AI လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် အသုံးပြုသူအတွေအ့ကြုံတွေအထိ စတဲ့စတဲ့ အရာတွေက အရင်ကထက်ကို ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလှပါတယ်။
*FOS 10.5 ရှိသည့် မော်ဒယ်တိုင်းတွင် Center Turbo နှင့် AI Turbo ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
Ultra Game Mode ဟာ နေ့စဉ်ဂိမ်းဆော့တာထက် ပိုပြီး pro ဆန်တဲ့ ပြင်းထန်မှုမျိုးနဲ့ Esports Mode ကို တွေ့ကြုံခံစားရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4D Game Vibration 2.0 က သင့်ကို နစ်ဝင်စီးမျောနေစေမယ့် တကယ့်စစ်မြေပြင်တွေထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဒါကတော့ pop-up window optimization ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင် အနိုင်ရရှိဖို့အတွက် အပြည့်အဝအာရုံစိုက်နိုင်စေရန် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် သတိပေးချက်တွေ၊ ဖုန်းအဝင်ခေါ်ဆိုမှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးတိုက်တရွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့ sidebar ကို တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့ အသစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Game Album နှင့် Screen Recording လုပ်ဆောင်ချက်ကို စတင်အသက်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ဖမ်းယူမှုများနှင့် အသံသွင်းမှုများအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ Game Album ထဲမှာ အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Smart Game Countdown လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင်၏ avatar သည် အသက်မဝင်ခင် ကျန်ရှိသောအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီး သင့်ဂိမ်းကို စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ပေးထားခြင်း - လူမှုမီဒီယာအသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့် အခြားသော အရာတွေလည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ Floating window တစ်ခုက countdown ကိုပြသပြီး တစ်ခါရပ်လိုက်ပြီး တစ်ချက်ပြန်ထိလိုက်တာနဲ့ ဂိမ်းကမ္ဘာထဲကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
*FOS 10.5 ရှိသော မော်ဒယ်အားလုံးတွင် ရနိုင်သည်။
1. ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဓာတ်ပုံရလဒ်များနှင့် အသုံးပြုမှု အတွေ့အကြုံအတွက် ဓာတ်ပုံများ၏ အမျိုးမျိုးသော pixel numbers သည် modes အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။
3. ယခု ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် ဒီဇိုင်းပညာရှင် တိုင်းတာသူများ၊ သုသေသန စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရလဒ်များနှင့် supplier များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်သည် software version ၊ specific test environment နှင့် phone model များအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲလွဲသွားနိုင်ပါသည်။
4. specifications များနှင့် ဖော်ပြချက်များသည် Vivo မှ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အချိန်မရွေး ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်များကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
5. Screen size မှာ ထောင့်ဖြတ် တိုင်းတာထားခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ထောင့်မှန်အပြည့်မှာ 6.47 လက်မဖြစ်ပြီး ထောင့်ချိုးအကွေးများ ထည့်သွင်းတိုင်းတာပါက အနည်းငယ် သေးငယ်သည်။
6. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားချိန် - ပါဝါအပြည့်၊ 4G ဆက်သွယ်မှု၊ 150cd/m² မျက်နှာပြင်တောက်ပမှု၊ 63dB(A) အသံအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ အချိန်တွေမှာဆို Y20 ဟာ PUBG ကို မြင့်မားသော ရုပ်ပုံအရည်အသွေး၊ အမှုန်အရည်အသွေး၊ စံပြတ်သားမှုနှင့် high frame rate mode (off) ဖြင့် 11 နာရီကြာ စဉ်ဆက်မပြတ် ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဂိမ်းအချိန်သည် အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
7. အွန်လိုင်းဗွီဒီယို streaming အချိန် - Flight mode ဖွင့်၊ မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုအနည်းဆုံး နှင့် စပီကာအသံအကျယ်ဆုံးထားထားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဆို Y20 သည် resolution 1080P ဖြင့် ဗီဒီယိုတွေကို ၁၆နာရီထိ ကြာအောင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်သောအချိန်သည် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။